Ukukhuphula Amakristari OkuShukela - Yenza I-Candy Candy Yakho
Indlela Yokukhuphula Amakristari Okushukela - Yenza I-Candy Candy Yakho
Amanyathelo Alula Ukukhuphula Amakristari Okushukela
Kulula ukukhulisa iikristal zakho zethusi! Amakristari e-Sugar ayaziwa nangokuthi i- candy candy ukususela kwi-sucrose crystallized (sugar table) efana ne-crystal and rock for your eating product. Unako ukukhulisa iiferi ezicocekileyo zetyuwa kunye noshukela namanzi okanye unokongeza umbala wokutya ukuze ufumane amacwecwe ambala. Yilula, ikhuselekile kwaye imnandi. Amanzi abilayo ayadingeka ukuba aphelise iswekile, ngoko ke ukucetyiswa kwabantu abadala kukucetyiswa kule projekthi.
Ixesha elifunekayo: iintsuku ezimbalwa ukuya kwiveki
Iidongwe ze-Candy Ingredients
Iikomityi ezi-3 itafile ishukela (sucrose)
ibhentshi okanye ibhotela
ipeni okanye isitya sokubilisa amanzi kunye nokwenza isisombululo
iipuni okanye ukuphosa intonga
Masikhule I-Rock Candy!
Hlanganisa izinto zakho.
Unokuba unqwenela ukukhula i- crystal yembewu , i-crystal encinci ukulinganisa intambo yakho kwaye unikezele ubuso bekristal ezinkulu ukuze zikhule. I-crystal yembewu ayimfuneko xa nje usebenzisa umtya okanye intambo.
Ukubopha umtya kwi-pencil okanye ibhotela. Ukuba wenze i-crystal yembewu, yibophe kwizantsi lomtya. Beka ipensela okanye ummese ngaphaya kwegumbi leglasi uze uqiniseke ukuba umtya unamathele kwisitya ngaphandle kokuchukumisa amahlangothi okanye ngaphantsi. Nangona kunjalo, ufuna ukuba umtya uxhomeke phantse ukuya ngasezantsi. Lungisa ubude bomtya, xa kuyimfuneko.
Bilisa amanzi. Ukuba ubilisa amanzi akho kwi-microwave, qaphela ukuba uyisuse ukukhusela!
Yenza ishukela, i-teaspoonful ngexesha. Qhubeka ukongeza ushukela uze uqale ukuqokelela ngaphantsi kwesithintelo kwaye awuyi kutshabalalisa nangakumbi. Oku kuthetha ukuba isisombululo sakho soshukela sizaliswe. Ukuba awusebenzisi isisombululo esipheleleyo , iikristst zakho aziyi kukhula ngokukhawuleza. Ngakolunye uhlangothi, ukuba ukongeza ushukela oluninzi, iikristal ezintsha ziza kukhula kwi-ushukela engagqitywanga kwaye kungekhona kwintambo yakho.
Ukuba ufuna ama-crystals enemibala, gubungela ngamaconsi ambalwa okubala.
Dlulisa isisombululo sakho kwisitya seglasi ecacileyo. Ukuba uneshukela engagqitywanga phantsi kwiphotile yakho, thintela ukuyifaka kwi-jar.
Beka ipensele phezu kwendawo kwaye uvumele umtya ukuba unqande kwi-liquid.
Beka ibhokisi kwindawo ethile apho ingahlala ingaphazamiseki. Ukuba uthanda, unokubeka itrayifri yekhofi okanye ityhuse yephepha phezu kwengubo ukukhusela uthuli olungangeni kwi-jar.
Jonga kwiikristali zakho emva komhla. Ufanele ukwazi ukuqala kokukhula kwekristal kumtya okanye kwi-crystal imbewu.
Vumela amakristali akhule ade afinyelele ubungakanani obufunayo okanye ayeke ukukhula. Kule ngongoma, unako ukukrazula umtya uze uvumele i-crystal ukuba iphele. Unokuzidla okanye uzigcine. Yonwaba!
Ukuba unenkathazo yokukhuphula i-crystals, usenokufuna ukuzama iindlela ezithile ezizodwa . I-video tutorial ebonisa indlela yokwenza i-rock candy ifumaneke, nayo.
Amakristali aya kwakha ngentambo yekotoni okanye yeboya okanye intambo, kodwa kungekhona kwinqanaba leyiloni. Ukuba usebenzisa i-nylon line, qhafaza i-crystal imbewu kuyo ukukhuthaza ukukhula kwekristal.
Ukuba wenza i crystals ukuba idle, nceda ungasebenzisi ubunzima bokuloba ukubamba umnqamlezo wakho phantsi. Ukhokelo oluvela kwisisindo luya kugqiba emanzini - luyingozi. Iziqeshana zePhepha zikhethekileyo, kodwa azinakulungele.
I-Goo Slime Recipe
I-Mini-ILogo ILogo Skateboard Deck Review
I-Top Joan Jett Iingoma zee-80s